कविता लेखेकै कारण मृत्युदण्ड सुनाइएका एक कवि - TESTING NEWS
Home / literature / कविता लेखेकै कारण मृत्युदण्ड सुनाइएका एक कवि
बिहीबार ४४ मुलुकका १२२ स्थानमा एकै कविका कविता विभिन्न भाषामा बाचन गरियो।
साउदी अरेबियाले मृत्युदण्डको सजाय सुनाएका प्यालेस्टीनी कवि अशरफ फयादका कविता ‘वल्डवाइड रिडिङ अफ अशरफ फयाद’ अभियानमा बाचन गरिएको हो।
‘अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य उत्सव, बर्लिन
’ ले उनको जीवनरक्षाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट दवाब सिर्जना गर्न यो कार्यक्रम आव्हान गरेको हो। कवि फयादलाई दिइने मृत्युदण्डको विरोधमा #AshrafFayadh ट्रेन्डिङ भइरहेको छ। यो ह्यासट्यागमा विश्वभरका कविताका पाठकहरू सहभागी छन्। थुप्रै कविहरूले ट्वीट गर्दै उनलाई सुनाइएको सजायको भर्त्सना नाममा कविता सिर्जना गरिरहेका छन् भने उनका विश्वका थुप्रै भाषामा अनुवाद भइरहेको छ।
को हुन फयाद?
कवि फयादको जन्म नै विवादास्पद र युद्वग्रस्त क्षेत्रमा भयो। यो शताब्दीमा सबैभन्दा अशान्त रहेको क्षेत्रमध्ये एक इजारयली सीमासँग जोडिएको प्यालेस्टाइनको गजापट्टीमा सन् १९८०मा उनको जन्म भयो।
त्यहाँबाट उनको परिवार साउदी अरब बसाइँ सर्‍यो। साउदी अरबमा उनी क्युरेटरको रूपमा काम गर्न थाले। उनले साउदी कलालाई युरोप र साउदी अरबकै विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शनी गर्ने गर्थे। ब्रिटिस-अरेबियन कला सम्बन्धि संस्था द एड्ज अफ अरेबियामा पनि सक्रिय थिए।
किन सुनाइयो मृत्युदण्ड?
सन् २०१३ को कुरा हो । अर्का एक कलाकारसँग उनको विवाद भयो। विवादले झगडाको रूप लियो। उनलाई साउदी प्रहरीले हिरासतमा लियो र धरौटीमा छोड्यो।
तर, सन् २०१४ जनवरी १ मा उनी फेरि पक्राउ परे। उनीमाथि धर्म परिवर्तन गरेको अभियोगमा मुद्दा चलाइयो। अदालतले चार वर्षको जेल र आठ सय कोर्रा सजाय सुनाएपछि उनले पुनरावेदन दिए।
उनको अपिल स्वीकार गर्दै मुद्दा पुनः तल्लो अदालतमा फर्काइयो। त्यहाँ नयाँ न्यायधीश आइसकेका थिए। जसले उनलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाए।
फयादमाथि साउदीको साइबर कानुन उल्लंघनको पनि अभियोग लगाइको छ। युवतीहरूको तस्बिर खिची आफ्नो मोबाइलमा राखेको अभियोग उनीमाथि लगाइएको छ, जुन त्यहाँको कानुनअनुसार अपराध हो।
उनले आफूमाथिका सबै अभियोग अस्वीकार गरेका छन्।
उनका कविताले नास्तिकता फैलाएको साउदी न्यायधीशको ठहर छ। इस्लाम नमान्न र ईश्वरको निन्दा गर्न उनका कविताले उत्प्रेरित गर्ने भन्दै साउदी अदालतले उनलाई मृत्युदण्ड सुनाएको हो।
सन् २००८ मा प्रकाशित उनको कवितासंग्रह ‘इन्ट्रक्सन विथइन’ मा संकलित केही कविताका आधारमा उनीमाथि यो अभियोग लगाइएको हो।
सन् २०१५ नोभेम्बर १७ मा उनलाई मृत्युदण्ड सुनाइयो।
उनको मुद्दा छिनोफानोको पुरै प्रकृयामा उनलाई वकिल राख्न नदिइएको एम्नेष्टी इन्टरनेसनल बेलायतले बताएको छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय न्यायीक अभ्यास र साउदी कानुन विपरित भएको उक्त संस्थाले दावी गरेको छ।
विश्वभरीबाट अझै पनि अशरफको अपील स्वीकारी उनको मृत्युदण्डको सजाय सच्याइने अपेक्षा गरिएको छ। वल्डवाइड रिडिङको आयोजक अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य उत्सव, बर्लिनले अमेरिका र बेलायतले अशरफको मुक्तिको पक्षमा बोल्नुपर्ने माग गरेको छ।
चितवनबाट अशरफको समर्थन
वल्डवाइड रिडिङ भएका ४४ मुलुकमध्ये एक नेपाल हो। चितवनमा अक्षर समूहको आयोजना र भिलेज अफ इंग्लिस राइटर्सको सहआयोजनमा कार्यक्रम भयो।
ईश्वर कँडेल, उदय अधिकारी, सुमनराज श्रेष्ठ लगायतले अशरफका नेपालीमा अनुदित कविता सुनाए। सरिता तिवारी र सुनिता गैरेले अङ्ग्रेजीमा उनका कविता सुनाए। भूपीन, प्रतिमा पाठक, इन्द्र रेग्मी, एलबी क्षेत्री, द्वारिका नेपाल लगायले अशरफको जीवनको पक्षमा लेखिएका कविता सुनाएका थिए।
अक्षर समूहका भूपीनले सेतोपाटीसँग भने, ‘एउटा कविले कविता लेखेकै आधारमा मर्नुपर्ने अवस्थाको विरुद्धमा हामी उभिएका हौं। कविले वाक स्वतन्त्रता उपयोग गर्न पाउनु पर्छ।’
उनले भने, ‘संसारभरी उनको मुक्तिका लागि कार्यक्रम भइरहँदा हामीले पनि आफ्नो दायित्व पुरा गरेका हौं।’